Izimfuno ungomunye izinhlobo ethandwa kakhulu computer ukuzijabulisa. Lihunyushwe kwelesiHeberu elithi imfuno IsiNgisi yokusesha. Usesho lokuqala umdlalo wangena 70s, kodwa eziqhathanisa zendalo yesimanje lonjiniyela kungaba okungalungile.
Rank izimfuno okuphume kangaka ngalé kwemingcele esingokoqobo virtual, futhi manje ubani bangahlola ikhono labo lokuphatha ukucindezeleka, ukuhlakanipha kanye ukucabanga okunengqondo in an adventure engavamile. Ngo ukubuyekeza kwethu, uzothola esesabekayo kakhulu isigaba (eMoscow) umdlali ukubuyekezwa kanye ulwazi olujwayelekile mayelana ukuzijabulisa entsha.
NgeNkathi Ephakathi, sona ucwaningo lwesayensi ngesikhathi travel - Abahleli abanamakhono ukubhala iskripthi yonke ukunambitheka. Izivakashi kwakwakhiwa kakhulu futhi yenza ngokuphelelwa yithemba uphiwa sesiphila uhlobo yokwesaba okukhulu. Ngibukele ifilimu horror uyobe wenza njengoba isibukeli. Kodwa kuthiwani uma zonke lezi zenzakalo kuzokwenzeka empilweni yangempela?
Ngakho, ingabe uyazi kakhulu adventure ezesabekayo? Moscow banganikela eziningi ezithakazelisayo futhi kujabulise. Izimo zethu zihluke kakhulu ovamile uwukuthi imfuno "Adrenaline". Abadlali indima Ochwepheshe eziphenya ukunyamalala okuyimfihlakalo uDavide Hoffman. UProfesa futhi physiologist wafunda hormone adrenaline nokulawula amakhono.
Okuthusayo izimfuno anezici yabo. Isinqumo logic imisebenzi futhi uthole voltage okukhiphayo nzima umkhathi abamesabi ngeqiniso. Ngenxa yalesi sizathu, umdlalo Ukudlula ayivunyelwe Izivakashi kweminyaka engu-18. Abahleli musa batusa Quest "Adrenaline" kwabesifazane abakhulelwe kanye nabantu isifo senhliziyo noma claustrophobia.
inombolo yabadlali kusukela 2 kubantu 4;
abiza ruble 5800 for the team.
Izimpendulo ezivela abahlanganyeli ekufuneni ngokuthi "Adrenaline" the best in uhlobo yayo. Indaba enkulu, umsebenzi nabalingisi, a simo esethusayo, imizwelo kanye ukucindezeleka - lokhu adventure mhlawumbe esibi kunazo eMoscow.
Hike i ifektri ishiywe uthembisa imfuno "Uhambo Kugcine". Bangaki izimfihlakalo igcina kule ndawo? Cishe amane edlule ke yalahlekelwa umkhaya, futhi ngemva kwesikhashana abazali wathola indodana efile ukuthola kwakungenakwenzeka. Njengoba wazi, yengozi akuyena yedwa.
Inzuzo ebaluleke kakhulu indawo imfuno. Isenzo senzeka khona ngalesi sitshalo - imishini ubudala, Uphahla lwangaphakathi eliphezulu, futhi zikagesi. Abadlali ku umphandu we Maniac, owathi wokufuna sangempela bangaphandle.
Ngokwe-izivakashi, "Uhambo Kugcine" - imfuno embi kakhulu. Moscow usakwazi kusimangaze! Kusukela ngeminithi lokuqala uzithola shí izinto ezithile kodwa bengaveli ngisho ngiqaphele ukuthi akuyona into nje umdlalo. Isibhakabhaka ezicindezelayo engapheli yabezindaba nokwesaba - akukho izinkinga okunengqondo, ngoba bonke imicabango kuthiwa matasa kanjani ukuzisindisa futhi iqembu.
Izindleko umdlalo emini kuyinto ruble 5000, futhi kusihlwa futhi ebusuku ababezohlangana kuyo noMbusi Maniac izobiza 6000.
Santa Claus - uhlamvu oluthandayo zonke izingane ngisho abadala ogcwalisa phestri. Kodwa ingabe uyazi ukuthi indaba zangempela Umkhulu amnandi ngesilevu?
Kwasukasukela kwakukhona idemoni esabekayo. Uthe wathunjwa futhi ahlukunyezwe abantwana ngenxa yokuziphatha kwabo okubi. Ukucekela silo wanquma zo futhi Labelaphi, kodwa ukwenza kwakunzima kakhulu. Khona-ke phezu wabeka ukupela idemoni ngawo wakhohlwa nya ngezenzo zobudlova yakhe. monster Vicious waba uSanta Claus, wayithanda izingane babapha nezipho.
Uma idemoni othandekayo Morra wabhubhisa ukupela ezinhle. Athukuthele Santa zikhunjulwe esidlule futhi wanquma ukuthatha revenge ...
Isigaba esibi kunazo (eMoscow) iyakwamukela abathandi uKhisimusi. Iqhaza main Santa Bloody kuthatha umlingisi professional - alungele ingozi yangempela futhi umzabalazo ukuphila.
umculo Omkhulu, puzzle esingavamile, nezindawo engavamile futhi 120 square metres. amamitha wemidlalo isikhala - kuzoba yamaprojekthi imizuzu 60 zokuphila kwakho. Engaziwa zidinga savvy, ukulolonga umzimba omuhle futhi ezilungele ukusebenzisana.
Izibuyekezo baziswa i lwendaba engavamile kanye nomklamo olungenakuqhathaniswa. Ngokwesibonelo, lapho ekamelweni ekamelweni ezihambayo, abadlali abanayo ukusebenzisa umnyango njalo, futhi izindaba kancane izisulu esidlule Santa liyochukuluza entsha adrenaline rush.
Izindleko imfuno incike isikhathi futhi ruble 3000-5000.
Njengoba umfana ovuma uthando lwakhe: imithetho izindaba ezinhle